Obomboleettii Maariyaa cimaan Kaaribiyaan rukute - BBC News Afaan Oromoo
Obomboleettii Maariyaa cimaan Kaaribiyaan rukute
Maariyaan obomboleetti Irmaatiin sarara walfakkaataa irra socho'aa jira
Obomboleettiin Maariyaa gara bubbee sadarkaa shanii 'badiinsa olaanaa' qaqqabsiisuutti guddachuun, odola Kaaribiyaan kan taate Dominikaa bubbee sa'aatiin kiloomeetira 260 bubbiisuun rukute.
Ministirri Muummee Dominikaa, Rosvelt Iskerit, fuula feesbukii irratti baaxiin manaa balaa kanaan hubamuu fi inni garuu lubbuun bahusaa ibsee jira.
Manni isaa guutuummaatti lolaan dhiqame, inni garuu baraaramee jira.
Buufanni xiyyaaraa fi dooniis cufamanii jiru.
Obomboleettii maqaan moggaasuun maaliif barbaachise?
Maariyaanis Irmaan obombolleettii ji'a kana naannicha barbadeesseen sararuma walfakkaataa irra socha'aa jira.
Odolli dhihootti argamtu Maartinikeenis akeekkachisa sadarkaa olaanaa kan labsite yoo ta'u, odolli Faransaay kan biraa Gu'adelowup ammoo uummanni akka gadi dhisuuf ajajjee jirti.
Akeekkachisi obomboleetti kan biraas jira:
Portoo Riikoo: Daangaan Ameerikaa akka sadarkaa sadaffaatti Maariyaan Kibxata lafa akka jigsu eegama. Balaa hamaa Irmaa jalaa bahee kan ture yoo ta'u, odoloota akka malee rukutamaniif bakka itti boqonnaa barbaachisaa ture. Bulchaan odolichaa Rikaardoo Roseeloo, jiraattoonni dahannoo akka gaafataniif waamicha taasiseera.
Odolawwan Ameerikaa fi Biritish: Odoloon lamaanu Irmaan balaa cimaaf kan saaxilaman yoo ta'u, Prezidaantiin Ameerikaa Donaald Traampis Wiixata darbe qarqara biyya isaatti labsii yeroo ariifachiisaa labsaniiru.
Akkasumas Senti Kittis fi Nevis, Montseraat fi Senti Lusiyaattis akeekachifni hojiirra oolaa jira.
Odollawwan kanneen keessaa muraasni balaa Irmaa, du'aatii namoota 37 fi badiinsa qabeenyaa dolaara biliiyoonaa irraa amma illeen boqochaa jiru.
Ministirri Mummichaa Dominnikaa balaa mana isaarratti qaqabe akkasiin ibse
Jiddu galli Obomboleetti Biyyaalessaa Ameerikaa (NHC) akka jedhutti ciminni Maariyaa Wiixata sa'aatiiwwan muraasa keessatti bubbee hamaa sadarkaa lamaa irraa gara sadarkaa afurii fi shaniitti ol guddate.
Raagtoonnis roobni cimaan obomboleetti umamu 'balaa lubbuu fi sigiga lafaa' geessisuu akka malu akeekkachiisaniiru.
Dominikaanis duraan bulchinsa Biritish jala kan turte yoo ta'u, walakkaan uummata ishee kuma 72 jidduu Guwadelokuwa fi Maartinik jiraatu.
Ijji obombolleettii Kibxata gara barii sigiga lafaa geessisuu isaa, NHC ibsee jira.
Bufataaleen xiyyaaraa fi donii hundi cufamuun jiraattonis akka gara dahannoo ajajameetti galan taasifameera.
Gaazexessaan magaalaa guddoo Roseyu keessati argamu Kurtis Maatiiw akka BBCtti himetti, haallichi baayyee hammaataa jira.
"Kan biraa hafee daandii illeen waan ta'aa jiru haalaan argu hindandeenye. Bubbeen baayyee cimaadha. Alaa sagalee ni dhageenya. Hanga haalichi darbutti dhiibbaan isaa maal ta'uu akka danda'u beeku hindandeenye. Garuu waanan jechuu danda'u, ammaan tana Dominikaatti haalli gaarii miti,'' jedheera.
Odola Leewaard bakka Maariyaan dursa rukutu
Mootummaan Biritish akka jedhettis, looltoonni 1,300 naannicha akka of eegannoon turan taasifamu isaanii dubbateera. Akkasumas humni looltu dabalataas odolawwan Biritish bakka ollaawwan hundi Irmaa itti baqatanii turan irra ka'amaniiru.
Ameerikaa obomboleettii Irmaa bakka duutii hedduun raawatameen rukutamtee jirti. Filoridaa, Jorjiyaa, Kaarolinaa Kaabaa fi Alabaamatti manneen miliyoona 6.9 ibsaa malee hafaniiru.
Obomboletti lammaffaa, Josee, ammas bubbee sa'aatti meetira 90 figuun Antaantikaa keessa socha'aa jira.
Jiddu galli Jose km 426niin gara baha -kibba-baha Kaarolaayinaa Kaabaa keessa Kep Haataras itti akka ragamu, NHC gorsa isaatii Wiixata ibseera.
Sadarkaa 1: bubbee sa'aatiin km 119-153. Balaa fi addaan cita aannisaa muraasaa
Sadarkaa 4: Bubbee sa'aatiin Km 209-251. Manneen haalaan ijaaraman balaa cimaaf saaxilamu. Mukkeen ni jigu.
Sadarkaa 5: Bubbee sa'aatiin km 252. Gamoowwan hedduun ni barbadaa'u. daandiiwwan gurguddoonis ni citu.
Barattuu Hitleriin mormitee Jarmaniif fakkeenya taate